गिजाको समस्याबाट पीडित हुन्छ ? यसबाट बच्ने उपाय जानिराखौं – Everest Dainik – News from Nepal
गिजाको समस्याबाट पीडित हुन्छ ? यसबाट बच्ने उपाय जानिराखौं
हामी दैनिक सुरुवातमा चिया वा कफीबाट सुरु गर्दछौं । कसैले चियामा अदुवा हालेर पिउन मन पराउँछन् त कसैले बिहानी समयमा ग्रिन टी पिउन रुचाउँछन् । कसैले ब्ल्याक टी त कसैले दुधको चिया मन पराउँछन् । सबैको आ–आफ्नै रुचि रहेका छन् ।
तर, के तपाईंले ल्वाङ राखेको चिया कहिल्यै पिउनुभएको छ ? ल्वाङ राखेको चियाले चियाको तलतल मात्रै मेटाउँदैन स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदा गर्छ । यदि तपाईं पनि चियाको शौखिन हुनुहुन्छ र बिहानै चिया पिएर दिनको सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने अबदेखि ल्वाङ राखेर चिया पिउने बानी बसाल्नुहोस् ।
किनकी ल्वाङ राखेर चियाले औषधि समान काम गर्छ । ल्वाङ चियाका फाइदा — गिजामा समस्या छ भने ल्वाङ हालेको चिया पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । ल्वाङ हालेको चिया नियमित सेवन गर्नाले गिजा र दाँतसँग सम्बन्धित समस्यामा राहत मिल्छ । यसले मुखमा भएको ब्याक्टेरिया पनि नष्ट गर्छ ।
— अहिले जाडोको मौसम पनि सुरु भइसकेको छ । जाडो मौसममा छाती दुख्ने समस्या हुनसक्छ । यस्तो बेला ल्वाङ राखेको चिया पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । यसले कफ सफा गर्न सहयोग गर्छ ।
— ल्वाङमा म्याग्नेसियम पाइन्छ । जसले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनबाट जोगाउँछ । साथै इम्यूनिटी पनि बढाउँछ ।
— ल्वाङ चिया पिउनाले पेट सम्बन्धी समस्यामा पनि राहत मिल्छ । यदि तपाईंमा एसिडिटी र पेट दुख्ने समस्या छ भने ल्वाङ चियाको प्रयोग फाइदाजनक हुन्छ ।
– ल्वाङ एक आयुर्वेदिक गुण भएको तत्व हो । छालाको लागि पनि ल्वाङ निकै फाइदाजनक मानिन्छ । नियमित ल्वाङ चिया पिउनाले छालासँग सम्बन्धित समस्यामा ठीक भएर जान्छ।
ट्याग्स: health, tea